Coming Soon: Social Media Kit for Local Groups - Update...
Coming Soon: Social Media Kit for Local Groups
Joining Hands for Local Think-tanks and Advocacy Groups
အောက်တွင် မြန်မာဘာသာဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်
Book Title: Social Media Quick Start Guide for Local Civil Society Organisations
Developed by Pandita Development Institute
Available on 29th January 2021.
For different reasons such as entertainment, information updates, or civic participation, social media isapopular communication channel for most of Myanmar’s population.
After long months of staying at home during Covid-19 pandemic in 2020, local CSOs in Myanmar communicate via social media platforms than ever.
Against this background, optimising the influence and effective online communication practices of think-tanks and advocacy organisations in Myanmar becomes crucial. Thus, the International Development Research Center (Canada), KIVU International and Pandita Development Institute joined their hands for this cause.
Their cooperation rewardsaSocial Media Quick Start Guide to increase local civil society actors’ capacities for effectively communicating and engaging stakeholders and beneficiaries online.
Pandita, withatrack record in employing Social Media for civic participation, developed the worthwhile Quick Start Guide in6main components: (1) Setting Communication Performance Goals; (2) Setting Target Audience; (3) Choosing the Right Channel; (4) Developing Content Strategy; (5) Maintaining Engagement, and (6) Monitoring and Evaluation.
After its launch on 29th January 2021, Pandita plans to organise two follow-up workshops for representatives of local civil society organisations. For sure, few of those participants will love on-demand tailored consultations, which will help master their organisation’s social media communication.
The Quick Start Guide, which dedicates to ‘all the colleague from different local civil society organisations’, opens with the following words:
In history, absolutely spontaneous movements are limited. Indeed, the strategic effort of strong-minded individuals caused most of the great movements. Trying, failing and trying repeatedly make way for those movements.​
စာအုပ်အမည် - ပြည်တွင်းအရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများအတွက် လူမှုကွန်ရက်ဆက်သွယ်ရေးလက်စွဲငယ်
ပြုစုသူ - ပဏ္ဍိတဖွံ့ဖြိုးရေးအင်စတီကျု
ထွက်ရှိမည့်ရက် - ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့
ဖျော်ဖြေရေးအတွက်၊ သတင်းတွေ သိရဖို့အတွက်၊ တိုင်းရေးပြည်ရာကိစ္စတွေမှာ ပါဝင်ဖို့အတွက် အစရှိသဖြင့်သော အကြောင်းရင်းပေါင်းများစွာနဲ့ လူမှုကွန်ရက်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေကြားမှာ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုအဖြစ် လူသိများနေပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကြောင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တစ်လျှောက် အိမ်တွင်းအောင်းခဲ့ရတဲ့ လပေါင်းများစွာ အတွင်းမှာတော့ ပြည်တွင်းအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ လူမှုကွန်ရက် ပလက်ဖောင်းတွေကို ဆက်သွယ်ရေးအတွက် အရင်ထက်ပိုပြီး သုံးလာကြရပါတယ်။
ဒီအခင်းအကျင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံက အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်မှုနဲ့ ထိရောက်တဲ့ အွန်လိုင်းဆက်သွယ်မှု အလေ့အထတွေ သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ ဖြစ်ထွန်းတိုးတက်လာစေဖို့ အရေးကြီးလှပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးရေးသုတေသနဌာန (ကနေဒါနိုင်ငံ)၊ KIVU International နဲ့ ပဏ္ဍိတ ဖွံ့ဖြိုးရေးအင်စတီကျုတို့ဟာ ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက် လက်တွဲခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့် ပြည်တွင်းအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ ဆောင်ရွက်နေကြသူတွေဟာ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ အကျိုးကျေးဇူး ခံစားရမယ့် လူပေါင်းများစွာတို့ကို ထိထိရောက်ရောက် ဆက်သွယ်ထိတွေ့နိုင်တဲ့ အရည်အသွေးတွေ ရရှိစေမယ့် လူမှုကွန်ရက်ဆက်သွယ်ရေး လက်စွဲငယ်တစ်ခု ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါပြီ။
နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုအတွက် လူမှုကွန်ရက်ကို သုံးစွဲရာမှာ အတွေ့အကြုံကောင်းတွေ ရှိခဲ့တဲ့ ပဏ္ဍိတက ဒီလက်စွဲငယ်ကို (၁) ဆက်သွယ်ရေး စွမ်းဆောင်မှုပန်းတိုင်များ သတ်မှတ်ခြင်း၊ (၂) ဦးတည်အုပ်စု ရွေးချယ်သတ်မှတ်ခြင်း၊ (၃) သင့်တော်သည့် လူမှုကွန်ရက်များ ရွေးချယ်ခြင်း၊ (၄) အကြောင်းအရာတင်ဆက်မှုမဟာဗျူဟာ ရေးဆွဲခြင်း၊ (၅) မပြတ်တမ်း ထိတွေ့တုံ့ပြန်ခြင်းနဲ့ (၆) စောင့်ကြည့်တိုင်းတာခြင်းဆိုတဲ့ အဓိက အပိုင်းခြောက်ခုနဲ့ ရေးဆွဲပြုစုခဲ့ပါတယ်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့မှာ ဒီလက်စွဲငယ်ကို မိတ်ဆက်ထုတ်ဝေပြီးတဲ့အခါ ပြည်တွင်းအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ ကိုယ်စားပြုဆောင်ရွက်နေသူတွေအတွက် နောက်ဆက်တွဲ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှစ်ခုကိုလည်း စီစဉ်သွားမှာပါ။ သေချာတာကတော့ ပါဝင်တက်ရောက်သူတွေထဲက ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လူမှုကွန်ရက် ဆက်သွယ်ရေးမှာ ပိုမိုပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်စေဖို့ တောင်းဆိုမှုအပေါ်မူတည်ပြီး သီးသန့်အကြံပေးအတိုင်ပင်ခံမှု အစီအစဉ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားဖို့ ရှိသေးတယ် ဆိုတာပါပဲ။
ပြည်တွင်းအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများတွင် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြသော မိတ်ဆွေ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသို့ ဆိုတဲ့ ရည်ညွှန်းချက်နဲ့ လက်စွဲငယ်ရဲ့ အဖွင့်စာသားကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပါပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သမိုင်းတလျှောက်မှာ ကောက်ခါငင်ခါ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ လှုပ်ရှားမှုကြီးတွေက ခပ်ရှားရှားပါ။ ဘယ်သူမှ သတိမထားမိတဲ့အချိန်မှာ တကုပ်ကုပ်နဲ့ မဟာဗျူဟာကျကျ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ လူတွေကြောင့်သာ ပြောင်းလဲလှုပ်ရှားမှုကြီးတွေ ဖြစ်လာတာပါ။ ကြိုးစားလိုက်၊ ရှုံးနိမ့်လိုက်၊ ထပ်ကြိုးစားလိုက်နဲ့ပဲ အပြောင်းအလဲကြီးတွေ ရှောင်လွှဲမရ ဖြစ်ပေါ်လာကြရတယ်။
My Burmese Days before the Pandemic